सभामुख महरामाथि बलात्कारको आरोप : यसरी गर्न सकिन्छ छानबिन
महिलाले श्रीमान्लाई किन अझैसम्म केही भनिनन् ? महिलाले किन पटकपटक विष खाइन् ?
मंगलबार, असोज १४, २०७६ सारङ्गी न्यूज
सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि यौन दुर्व्यवहारको गम्भीर आरोप लागेपछि यतिबेला नेपाली राजनीति तातेको छ । सभामुख महराले भने आफूमाथि लगाइएको आरोपहरुको खण्डन गरेका छन् ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराको राजीनामा
साझा पार्टी र कांग्रेस सभापतिहरुद्वारा सभामुख महराको राजीनामा माग
महराको तर्फबाट प्रेस संयोजक डिल्ली मल्लले गरेको खण्डनमा महरा असोज १२ गते आइतबार अपरान्ह २ बजेदेखि बालुवाटार निवासमै रहेको र अन्त कहीँपनि नगएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर आरोप लगाउने महिलाले महरा करिब ७ बजे तीनकुनेस्थित उनको डेरामा आएको र आफूमाथि यौन अपराध गरेको मिडियाबाट आरोप लगाएकी छिन् । यद्यपि महराले गरेको भनिएको ‘यौन दुर्व्यवहार’को सम्बन्धमा ती महिलाले प्रहरीमा औपचारिक उजुरी वा निवेदन दिएकी भने छैनन् ।
यसरी गर्न सकिन्छ छानबिन
महिलाले यौन अपराधको आरोप लगाएपछि महराको तर्फबाट त्यसलाई कपोलकल्पित भन्दै महरालाई खुइल्याउन ‘कठपुतली’ खडा गरिएको भनेका छन् । तर आफ्नो संलग्नता छैन भन्ने आधार भने प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
संलग्नता वा असंलग्नता अब यसरी खोजौं
१. महराको सिडिआर रिपोर्ट
मोबाइल टेक्नोलोजीमा सिडिआर अर्थात् कल डिटेल्स रिपोर्ट हुन्छ । यो भनेको महराले त्यसदिन वा समयमा को को व्यक्तिलाई फोन गरे ? कुन कुन समयमा कति–कति मिनेट कुरा गरे । उनी कुन लोकेशनमा कति समय रहे आदि सबै कुरा स्पष्टरुपमा आउन सक्छ । यदि महरा ती महिलाको कोठामा गएका थिए भने सिडिआर रिपोर्टले उनको मोबाइलको लोकेशन तीनकुने देखाउनेछ भने विज्ञप्तिमा भनिएजस्तै उनी बालुवाटारस्थित सभामुखको निवासमै थिए भने उनको लोकेशन बालुवाटार नै देखाउनेछ ।
अर्को सवाल पनि उठ्ला, कतै महराले मोबाइल घरमै राखेर पो तीनकुने गएका थिए कि ? त्यो सम्भावना पनि नरहला भन्न सकिन्न । तर यदि त्यस्तो भएको खण्डमा पनि त्यो समयमा साँझ ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म महराको ती मोबाइलहरुमा फोन लाग्यो कि लागेन, उठ्यो कि उठेन त्यो हेर्न सकिनेछ ।
२. सिसिटिभी फुटेज
यौन अपराधको घटनामा महराको संलग्नता छ कि छैन भनेर छानबिन गर्ने अर्को माध्यम भनेको विभिन्न स्थानको सिसिटिभी फुटेज नै हो । यसका लागि सरकारले प्रहरीलाई निष्पक्षरुपमा छानबिन गर्न दिएमा यो घटनाको वास्तविकता बाहिर आउनेछ ।
महराको तर्फबाट आएको विज्ञप्तिलाई आधार मान्ने हो भने उनी अपरान्ह २ बजेसम्म सिंहदरवार र त्यसपछि बालुवाटारस्थित निवास गएको भनिएको छ । यी दुवै स्थानमा सिसिटिभी क्यामेरा राखिएका छन् । त्यसकारण महरा कुन बेला निवास पुगे, कुन बेला कहाँ गए भन्ने सबै कुरा सिसिटिभीमा देखिनेछ ।
त्यसबाहेक बानेश्वर एरिया र ती महिला रहेको एरियामा पनि केही सिसिटिभी क्यामेरा रहेका छन् । ती स्थानहरुको सिसिटिभी फुटेज पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । त्यसका लागि महरा आफैले अनुसन्धानलाई सघाउनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेछ ।
३. ड्राइभरको बयान
त्यो समयमा घटना गराउनका लागि यदि महरा तीनकुने पुगेका थिए भने पक्कै पनि सवारीसाधन लिएर गएका थिए होला । यदि ती महिलाले भनेको जस्तै ‘निलो गाडी’ लिएर गएका थिए भने ती गाडीका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर बयान लिन सक्नेछ र छानबिन पनि गर्न सक्नेछ । यसबाट पनि केही तथ्य खुल्नेछ ।
४. भेजाइनल स्वाब र डिएनए परीक्षण
सभामुख कृष्णबहादुर महराले यदि ती महिलामाथि यौन अपराध गरेकै हुन् भने महिलाले प्रहरीकोमा उजुरी दिएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सक्नेछिन् । स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा महिलाको भेजाइनल स्वाबको स्याम्पल लिएर महराको विर्यसँग ‘म्याचिङ’ गराउन सकिनेछ ।
तर यदि यौन अपराध अर्थात् बलात्कार नै गरेका हुन् र अपराध गर्दा कण्डमको प्रयोग भएको छ भने भने भेजाइनल स्वाबमा त्यो स्याम्पल भेटाउन सकिँदैन ।
तर अर्को उपाय भने बाँकी नै रहनेछ । त्यो उपाय के हो भने महिलाको शरीरमा रहेको घाउबाट डिएनए स्याम्पल लिने । ती महिलाले भनेअनुसार त्यो चिथोरिएको घाउ महराबाटै भएको अपराध हो । यदि त्यो महराले नै गरेका वा गराएका हुन् भने महराको डिएनएसँग म्याचिङ गर्न सकिनेछ ।
५. भाइबरको म्यासेज
ती महिलाले महराले भाइबरमा पनि पटकपटक आपत्तिजनक म्यासेज पठाएको भनेकी छिन् । यदि त्यसमा सत्यता छ भने महिलाले भाइबरको म्यासेज पनि सार्वजनिक गर्न सक्नेछिन् । त्यसबाट पनि केही कुरा बाहिर आउनेछ ।
अब सवाल उठ्छ, यदि यो घटनामा सत्यता छ भने ती महिलाले किन अहिलेसम्म प्रहरीकोमा लिखित उजुरी वा निवेदन दिइनन् ? प्रहरीका अनुसार आइतबार राती फोनमा जानकारी गराएपछि प्रहरी पुगेर केही तस्वीर खिचेको छ । तर महिलालाई उजुरी दिन आग्रह गर्दा महिलाले भने भोलि बिहान (सोमबार बिहान) आउने बताइन् । तर सोमबार ती महिला प्रहरी कार्यालयमा आइनन् । बरु मिडियामा गएर कुरा पोखिन् ।
यति ठूलो ‘अपराध’ भएको भन्दै मिडियामा सार्वजनिक भएकी महिलाले घटनाबारे अहिलेसम्म आफ्नै श्रीमानलाई भने केही बताएकी छैनन् । मंगलबार बिहान रातोपाटीको सम्पर्कमा आएका महिलाकी पतिले घटनाबारे केही जानकारी नभएको र श्रीमतीले आफूलाई फोनसमेत नगरेको बताए ।
घटनामा महराको संलग्नता होला कि नहोला त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा उनले आफूलाई केही थाहा नभएकाले अहिले नै केही भन्न नसक्ने भन्दै आफू बुधबार मात्रै काठमाडौँ आउने बताए । अहिले उनी कामको सिलसिलामा काठमाडौँबाहिर रहेका छन् ।
महिलाले किन पटकपटक विष खाइन् ?
महरामाथि गम्भीर आरोप लगाउने महिलाले यसअघि २ पटक विष खाएको बताइएको छ । पछिल्लोपटक करिब १ वर्षअघि महिलाले विष सेवन गरेकी थिइन् । विष सेवन गरेर गम्भीर बिरामी भएपछि उनलाई करिब १५ दिन अस्पतालमा राखेर उपचार गरिएको उनका श्रीमान्ले रातोपाटीलाई बताएका छन् । श्रीमान्का अनुसार उनले लामो समयदेखि डिप्रेसनको औषधी खाएकी थिइन् । तर विषकाण्डपछि अब आफूले त्यस्तो केही हर्कत नगर्ने र सामान्य जीवन बिताउने बताएकी थिइन् ।
मंगलबार, असोज १४, २०७६, १२:१०:००
#महरा बलात्कार प्रकरण
रुपाको आँपुखोलामा बाटो ढलान, स्थानीयबासी खुसी
नेकपा विवाद झन् जटिल मोडमा : स्थायी कमिटी बैठकमा यसकारण गएनन् ओली
राहत बाेकेर बाढी पहिराे पीडितकाे दैलाेमा मुख्यमन्त्री (फाेटाे फिचर)
आईतबार, साउन ११, २०७७ सारङ्गी न्यूज
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाखको विपद कोष बनाउन सांसद् कोइरालाको माग
सोमबार, साउन ५, २०७७ सारङ्गी न्यूज
गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक कोइरालाले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा २५ लाखको विपद् कोष बनाउन माग गर्नुभएको छ । पुरा पढ्नुहोस्